Asithokozile ngoNobhala wekhansela ku-ward 10 | News24
Asithokozile ngoNobhala wekhansela ku-ward 10
MHLELI, engosini yakho ngicela ukuthatha lelithuba ngike ngidlulise iskhalazo esinazo ngoNobhala waka ward 10 kwaPata.
Siwumphakathi sekukaningi sibekezela kodwa manje sesiyehluleka sinenkinga ngonobhala esithi njalo uma sifika ehhovisi ekuseni singamfici kuthiwe hlampe useza sihlale silinde kodwa lutho ukufika kuze kube umuntu ugcina ngokuhamba eya lapho ephuthuma khona ,mawuthi ufika emini ngezinye izinsuku futhi nakhona awumfici ehhovisi umthola ehleli ezindaweni zokushisa inyama ezisendaweni okanye umthole ehleli ema carwash kodwa sibe siding usizo lwakhe siwumphakathi.
Makwenzekile wamfica ehhovisi nakhona ufika ekupiklela aze akhiphe amazwi athi akaholelwa yithina siwumphakathi. Kukhala ngisho izalukazi namakhehla zithi iyadelela leyangane maziyocela ukusizwa okanye ukuchazela lapho zidideka khona ngokwamaphepha.
Mawufika ehhovisi uzobika udaba okhalaza ngalo ehhovisi lakhe unithembisa into aqede angayenzi njengoba kwenzeka emavikini edlule siwumphakathi silethe iskhalazo ngezimoto eziletha amanzi endaweni wasithembisa ukuthi uzoza kuthina kodwa akazange asigcine lesosithembiso okuthe uma sifika ehhovisi futhi sesiyomlanda sangamfica sacela ukusebenzisa ucingo lase hhovisi ukuze sifonele kwamasipala kwathiwa alukho uhamba nalo .
Siyacela imeya kanye nezikhulu zika masipala zike ziyifakele izibuko lendaba.